Mapurisa eZimbabwe Republic Police aita neChitatu musangano nemasangano anomirira vatori venhau apo vabvumirana kuti vanofanira kupanana mukana wekuti mumwe nemumwe aite basa rake pasina kuvhiringidzana.
Vati chimwe chezvisungo zvemusangano wanhasi ndechekuti mapurisa nevatori venhau varemekedzane apo vanenge vachiita basa ravo.
Amai Charamba vatiwo zvimwe zvabuda ndezvekuti vatori venhau havafaniri kunyora manyepo kana mashoko anokonzeresa mhirizhonga munyika.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists, VaFosterDongozi, vaudza Studio7 kuti vafara chose nemusangano wanhasi apo mapurisa nevatori venhau vataura pachena zvichemo zvavo.
VaDongozi vati kunyange vatori venhau variivo vanogara kuchema chema nemabatirwo avanoitwa nempurisa, musangano wanhasi waburitsao pachena kuti mapurisa haafariwo nemamwe maitiro evatori venhau nemakambani avo.
VaDongozi vati masangano anomirira vatapi venhau akazvipria kugadzirisa matumbidziko anotarisana nempaurisa kuitira kuti basa ravo nenyika zvifambire mberi.
Amai Charamba vazivisa musangano wanhasi kuti vakatomboisa zvichemo zvavo kune vamwe vapepeti vemapepanhau pamwe nemasanagano anomirira vatapi venhau akaita seVolunatry Media Media Council, VMCZ, asi havana kuwana mhinduro.
Mutevedzeri wasachigaro weVMCZ zvakare vari nhengo yevakuru vakuru vesangano reMedia Institute of Southern Africa Ziumbabwe, VaChris Chinaka, vavimbisa Amai Charamba nevamwe vavo kuti vachaongorora nyaya iyi pamwe nekuigadzirisa.
Musangano uyu unotevera mumwe musangano wakaitwa nemapurisa nemasangano aya gore rapfuura nechinangwa chekugadzirisa hukama pakati pemapurisa nevatori venhau.
Amai Charamba vati mapurisa anoda vatori venhau uye vatori venhau vanoda mapurisa kuti nyika ifambire mberi.